Hetsiky ny Ben’ny Tanàna Rosiana Teo Aloha mba Hamorona Fampirantiana Kanto ‘Poutine–Maherifo’ · Global Voices teny Malagasy
Hetsiky ny Ben'ny Tanàna Rosiana Teo Aloha mba Hamorona Fampirantiana Kanto ‘Poutine–Maherifo’
Voadika ny 18 Avrily 2017 7:56 GMT
Efitra iray amin'ilay famoronana ho an'ny “Fampirantiana Poutine-Maherifo.” Sary: Boomstarter.ru
Mpandraharaha izay nisy fotoana nisahana ny asan'ny ben'ny tanànan'i Arkhangelsk i Alexander Donskoi, hatramin'ny nisamborana azy noho ny antony heloka bevava ara-toekarena sy fanararaotana ny toerany. Amin'izao, tomponà tambajotranà tranombakoka sy fisarihana mpizaha tany antsoina hoe “The Big Funny Association” (Ilay Fikambanana Lehibe Mampihomehy) izy. Ao ambadiky ny tetikasa mba hamoronana fampirantiana kanto vaovao hanomezam-boninahitra an'i Poutine, filohan'i Rosia, ihany koa i Donskoi, ary tiany hampitondraina ny anarana hoe “Poutine-Maherifo” io.
Manandrana manangona ny vola hiaingana ho an'ilay hevitra fampirantiany i Donskoi ao amin'ny Boomstarter, sehatra Rosiana mitovy tanteraka amin'ilay vohikala Kickstarter. Angatahany ireo mpamatsy vola hanome azy mialoha vola mitentina 3 tapitrisa roubles (eo amin'ny $52,000). Raha afaka mahangona ny vola ilaina izy, mieritreritra ny hanao ilay fampirantiana ao Maosko sy St. Petersburg, ary New York City sy Berlin.
Hatreto aloha, iray andro ao anatin'ny hetsika, 50 roubles (eo amin'ny 86 cents eo) fotsiny no voahangony.
Tsy hoe fahelàn'ny fanombohana noho ny tsy fahampian'ny andrana anefa. Mba hanampiana ny fisintonana ny sain'ny olona, naokaramain'i Donskoi i Yulia Dyusheva, vehivavy 21 taona, mpianatra fanaovana gazety ao amin'ny Anjerimanontolon'ny Fanjakan'i MAosko, izay nanomboka tamin'ny dokambarotra hita ao amin'ny Boomstarter. Ny volana Desambra lasa teo i Dyusheva, izay mpilatro an-tsary sy nilaza tena ho “tia tanindrazana,” dia voafidin'ny Life.ru, sehatra mpomba an'i Kremlin, ho “vehivavy manintona indrindran'ny fikotranana ao amin'ny Anjerimanontolon'ny Fanjakan'i Maosko”.
Yulia Dyusheva. Sary: Vkontakte
Tao amin'ny lahatsary fampahafantarany, lazainy amin'ireo mpijery fa ilaina ny fanampian'izy ireo mba hiadiana an'ireo “milaza zavatra ratsy” momba ny Filoha Poutine.
Ao amin'ny Boomstarter, manome andran-tsira amin'ny zavatra mety ho hitan'ireo mpitsidika amin'ny fampirantiana Poutine-Maherifo, i Donskoi sy ny ekipany. Eo amin'ny toerana fidirana dia ahitàna ny sainam-pirenena Rosiana, ny mari-panjakana, ary ny tonon'ny hiram-pirenena Rosiana, ampian'ny tsanganana manjelanjelatra miendrika an'i Poutine. Mety tsara amin'ny fakàna sary samirery io tsanganana io, hoy i Donskoi.
Sary : Boomstarter.ru
Ny efitra manaraka indray dia hisy fiovàna lehibe ahitàna ireo fotoana nikorontan'i Rosia ny taona 1990. “Tsarovy ireo làlana maloto feno mpivarotra mora be, ireo mpanao heloka bevava isaky ny kihon-dàlana, ary ny fahapotehana ny taona 1998,” hoy ny vakin'ny fanambaràn'ny Boomstarter. Ho efitra mitsilopilopy io fampirantiana io, miaraka amin'ny fiarakodia Sovietika simbasimba sy notapahina, feno fako ary soratsoratra mankahala an'i Yeltsin.
Avy eo, hamantatra ny fiandohan'i Vladimir Poutine ireo mpitsidika, amin'ny famakiana ireo fahatsiarovana mientanentan'ireo mpampianatra azy tany an-tsekoly, izay aseho eo amin'ny rindrina lehibe miendrika gazetin'ny vanimpotoana Sovietika.
Ho gazety mivelabelatra kokoa ireo toerana manaraka, mampiseho ireo vaovao lehibe amin'ny fahalavoan'ny URSS, ary fanomezam-boninahitra ny andraikitr'i Poutine niaraka tamin'ny KGB tany Alemàna Atsinanana .
Hanam-bitana hiditra ao amin'ny endrika mitovin'ny biraon'ny filoha ihany koa ireo mpitsidika, tafiditra amin'izany ny famerenana mitovy ny endriky ny latabatra ofisialin'ny filoha. Hasaina hipetraka eo amin'ny birao ireo vahiny ary mamarana ny fehezanteny hoe “Raha filoha aho, dia hanao…” Araka ny filazalazan'ny Boomstarter, hahazo loka ireo mpitsidika manao kabary tsara indrindra isaky ny vondron'olona miditra.
Ireo efitra maro manaraka kosa haneho tapatapaka gazety maro mamerina milaza ny fipoiran'i Rosia indray nanomboka tamin'ny fitondràna voalohan'i Poutine, izay mifarana amin'ny fampirantiana ireo fialamboly ankafizin'ny filoha: misidina amin'ny “grue”, mampalefaka tigra, ary misakambina bera avy amin'ny ilabolantany — ireo rehetra ireo tena zavamisy amin'ny fiainany, ary sarinà fotoana tena voarindra tamin'ireo dingana rehetran'i Poutine nandritry ny taona maro.
Ho fanampin'ny toerana fivarotana sakafo izay nolazaina ho nanome “sakafo tsotra” nohanin'i Poutine fony izy ankizy, afaka manantena ny hahita “Efitra Misary Fahitàna Mivantana Miaraka amin'i Vladimir Poutine” ireo vahiny, ary “Misidina Mankany Krimea Miaraka Amin'ny Filoha Poutine, kanefa tsy miala ao amin'ilay tranombakoka.” Tsy manome andinindininy amin'ireo kilalao roa ireo i Donskoi.
Tsy i Alexander Donskoi mihitsy no olona noheverina hanonofy hanao fampirantiana “Poutine-Maherifo”. Raha ny marina, nanambara ny vinavinany hirotsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena izy ny taona 2008, raha niala tamin'ny toerany i Poutine.
Ny volana Febroary 2007, taminà tafatafa niaraka tamin'ny gazety Novaya Gazeta, nilaza i Donskoi hoe niantso azy an-telefaona i Ilya Klebanov, iray amin'ireo olona nahazo alàlana ofisialy avy tamin'i Poutine, ary nandrahona ny hitory azy aminà fiampangàna heloka bevava maromaro, raha tsy niala tamin'ilay fifaninanana izy.
“Tsy hisy hiresaka amiko ireo olona ao amin'ny sampandraharahan'ny fitondràna,” hoy i Donskoi nitaraina tao amin'ny tafatafa. “Ny tena marina, tsy nieritreritra mihitsy aho hatrizay hoe mety hisy ny zavatra toy izany amin'izao vanim-potoana izao. Nieritreritra aho hoe tamin'ny fotoanan'ny Kaominista ihany izany no afaka nisy — ny ho lasa mpanohitra ato anatin'ny firenentsika.”
Tsy tonga hatrany amin'ny biraom-pifidianana mihitsy izy, ary tonga dia lasa kinendrin'ireo fanadihadiana heloka bevava maro, izay niafara tamin'ny famoizany ny toerany tamin'ny maha-ben'ny tanàna azy.
Maherin'ny folo taona taty aoriana, niova ny zavatra rehetra ho an'i Alexander Donskoi, izay ankehitriny manolotra “sakafon'ny filoha sy fitsidihana tarihana” ho an'ireo rehetra mampiasa 20.000 roubles ($340) na mihoatra, amin'ilay heviny hanao fampirantiana “Poutine-Maherifo”.